ZTE Blade V8 dia manolotra kinova Mini sy Lite ho an'ny tsiro rehetra | Vaovao momba ny gadget
ZTE Blade V8 dia manolotra kinova Mini sy Lite ho an'ny tsiro rehetra
Mpanamboatra sinoa iray hafa izay tsy mitsahatra ny manaitra antsika amin'ny telefaona finday, na dia tsy natsangana ho marika tsara aza izy, ZTE dia orinasa iray izay niaraka taminay saika hatramin'ny nanombohan'ny telephony marani-tsaina, ary tsy afaka manadino ny Kongresy Manerantany Finday tsy misy fotony. . Androany izy ireo dia nijanona mba hanome topy maso antsika momba izany ny fanoloran-tenany lehibe ho an'ny fahasamihafana, ny ZTE Blade V8 Mini ary ny kinova Lite izay hiaraka aminy koa eo amin'ny tsena. Ireo fitaovana roa ireo dia manolotra toetra mampiavaka azy samy hafa, andao hofantarintsika izy ireo.
Voalohany aloha dia mandeha any izahay Lite version, Ity fitaovana ity dia hanana efijery dimy santimetatra amin'ny famaha FullHD, tsy misy zavatra tokony hialona ireo fitaovana hafa heverina ho avo lenta, satria hahafaly ireo mpanjifa horonantsary. Toy ny teboka malemy, manafina ao ambadiky ny chassis aluminium misy azy izy io MediaTek MT6750 mid-range ary ihany 2GB an'ny RAM haseho izany fa ampy nefa tsy mirehareha. Niaraka tamin'i 16GB fitehirizana Ao amin'ny kinova fidirana ary ahoana no fomba hafa, fakan-tsary faran'izay ambany manetriketrika, mpamaky ny dian-tànana ary ny loko marokoroko mahazatra. Ho an'ny fakantsary eo anoloana dia hanana 5MP toy ny rahalahiny isika amin'ny kinova «mini».
Ho an'ny Blade V8 Mini, ZTE mitazona ny tsara indrindra, fakan-tsary indroa miaraka amin'ny sensor 13MP sy sensor 2MP izay hilalao tsy misy fanageIo dia hahafahantsika mankafy "mode portrait" sy 3D. Ao anatiny dia manafina processeur somary avo kokoa, Snapdragon 435 hahazoana fampisehoana kely kokoa, na dia indray mandeha aza isika dia hahita fetrany kely amin'ny 2GB RAM. Mazava ho azy, ny efijery 5-inch azy dia lasa 720p, izay hisy fiantraikany be amin'ny fampisehoana, miaraka amin'ny 16GB fitehirizana anatiny.
Mangina ny orinasa sinoa momba ny vidiny sy ny bateria, saingy ny fahafantarana ny ZTE dia hahita vidiny ambany sy mifaninana izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » ZTE Blade V8 dia manolotra kinova Mini sy Lite ho an'ny tsiro rehetra
PlayStation VR nivadika ho tampoka izay na i Sony aza tsy nampoizina
Alcatel PLUS, fitaovana 2-in-1 misy fiasa Windows sy LTE